कर प्रशासनको उत्पादकत्व बढाउने काम भइरहेको छ
सरकारले राजस्व सङ्कलन दोब्बर पार्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसका लागि यस वर्षलाई कर वर्षकै रूपमा अभियान सञ्चालन गरेको घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत नै गर्नुभएको छ । त्यसैअनुसार राजस्व प्रशासनले संरचनागत र राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा दसौँ राष्ट्रिय कर दिवस बुधबार मनाइँदै छ । यही सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, अर्थमन्त्री शर्माले गोरखापत्र अर्थबजार संयोजक केदार भट्टराई र समाचारदाता विश्वास रेग्मीलाई दिनुभएको अर्थवार्ताको सम्पादित अंश :
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेयता यहाँले बारम्बार राजस्व सङ्कलन बढाउन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । अहिलेकै परिस्थितिमा राजस्व बढाउन सकिने आधारहरू तयार भइसकेको हो ?
राजस्व वृद्धिमा हामीले प्रशासनिक सुधार र कार्यकुशलता, चुहावट नियन्त्रण, राजस्वको दायरा विस्तार तथा करदाताहरूमा स्वेच्छिक कर सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसै कारण यो वर्ष हामीले ‘स्वेच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि ः सुशासन विकास र समृद्धि’ भन्ने नारासाथ अघि बढेका छौँ ।
कर सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिलाई अहिलेसम्म सफलताको आधार मान्ने स्थापित मान्यताजस्तै बनेको छ तर करको सदुपयोगको प्रश्न सधैँ उठिरहन्छ । कर दिवसका सन्दर्भमा करको अधिकतम सदुपयोग सन्दर्भमा सरकारको योजना के कस्तो छ ?
करको दर र दायरा विस्तारको सन्दर्भमा समय–समयमा आयोग बनाइने र त्यसबाट सुझाव लिने औपचारिक काम मात्रै भएको छ । यस्ता आयोग अथवा समितिबाट प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता के हो ?
निजी क्षेत्रले पनि बारम्बार करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् । करको दायरा विस्तारमा सरकारको प्रयास अब कस्तो हुन्छ ?
 करको प्रभावकारिता सरकारले गर्ने खर्चमै देखिन्छ । खर्चका सन्दर्भमा यहाँले दिनुभएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था के छ ?
 कर प्रशासन सुधार, कर सङ्कलन लागत घटाउने सन्दर्भमा सरकारको प्रयास के छ ?
 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकै प्रकृतिका कर उठाउँदै आएको र त्यसको असर करदातामा परेको गुनासो आउने गरेको छ । यसको निराकरणका कसरी गर्ने गरिएको छ ?
तीन तहको अधिकार संविधानमा उल्लेख भएको छ । सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो । कतिपय क्षेत्रमा दोहोरो पर्न जाने सम्भावनालाई आ–आफ्ना अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टतासमेत आवश्यक देखिएको छ ।